Madaxweyne Oo Xidigaha Real U Tilmaamay 2 Arin Oo Caawa Ka Saacidi Karta Inay Xasuuqan PSG %
Davor Suker, oo ah ciyaaryahan hore oo Real Madrid ah, islamarkaana waqti xaadirkaan ah, Madaxweynaha xiriirka kubada cagta dalka Croatia, ayaa wuxuu ka hadlay ciyaarta adag ee caawa dhexmari doonta Real Madrid iyo PSG.
Kulankaan oo ka tirsan lugta labaad ayaa waxaa ciyaartii hore ay kusoo kala baxeen labadda dhinac 3-1, markaasoo lagus oo lagday PSG, iyadoona ay tani faa’ido weyn ay utahay Los Blancos.
Laakiin, Suker ayaa wuxuu uga digay ciyaartoyda Madrid inay ku fikiraan inay gool aysan raadin, taasoo uu sheegay in ay halis gelin karto isagoona ugu baaqay inay ugu yaraan ay dhaliyeen Hal gool, ayna kubad fiican dheelaan.
“Madrid, waa inay dhalisaa ugu yaraan Hal gool, laakiin waxaa waajib ku ah in udheelaan sida in lugtii hore lagu soo kala baxay 0-0,” ayuu Suker usheegay Majalada MARCA, ee dalka Spain, xili uu wareysi siiyay.
“PSG, waxay haysataa ciyaaryahan waa weyn, oo fiican, kuwaasoo dhalin kara Khasaaro lixaad leh,” ayuu cod dheer ku sheegay Madaxweynaha.
“Laakiin, Los Blancos wiilasheeda waxay ogyihiin inay soo shaqeysteen lugtii koowaad, waana inay sidii oo kale ay udheelaan, waxaana muhiim ah inay ushaqeeyaan nafsi ahaan,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay.
Champions LeagueDavor SukerPSG vs Real Madrid
Mourinho Waa Mid Kamid Ah Dadka Helaya Faa’ida Ugu Badan Koobka Aduunka 2018 [Sabab]